Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UMlawuli weThutyana omtsha wokukhokela kwi-TPDCo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Umlawuli omtsha wexeshana we-TPDCo uGeorgeia Robinson
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, namhlanje udibene no-Nobhala osisigxina we-Ofisi yoMphathiswa, u-Jennifer Griffith, kunye neBhodi yabaLawuli yeNkampani yoPhuhliso lweMveliso yezoKhenketho (TPDCo).
IBhodi yonyula uGeorgeia Robinson okwangoku onguMlawuli weeNkonzo zeZiko ukuba angene kwisikhundla soMlawuli weThutyana.
UMnu Lionel Myrie, uMlawuli wangoku woPhuhliso lweMveliso noKhenketho loLuntu, akazukuthatha esi sikhundla sethutyana.
Ukufunwa kwabalawuli abatsha abasisigxina kuya kugqitywa kule nyanga.
Emva kolo thethwano, iBhodi ichonge, uGeorgeia Robinson, uMlawuli weeNkonzo zezoLawulo ze-TPDCo, uMlawuli weThutyana weThutyana de kube kugqityiwe ukuqeshwa koMlawuli omtsha.
UMnu Lionel Myrie, uMlawuli woPhuhliso lweMveliso noKhenketho loLuntu, akazukuthatha isikhundla sokuba nguMlawuli weThutyana.
The Inkampani yoPhuhliso lweMveliso yoKhenketho Ltd. (TPDCo) liziko eliphambili eligunyazwe nguRhulumente waseJamaica ukuququzelela ulondolozo, uphuhliso kunye nokomeleza imveliso yezokhenketho. I-TPDCo ibisebenza ukusukela nge-5 ka-Epreli 1996, kwaye ibhaliswe njengenkampani yabucala ephantsi kolawulo loMphathiswa Wezokhenketho. IBhodi yaBaphathi ijongene nemigaqo-nkqubo yenkampani kunye nezicwangciso-qhinga. UMlawuli oLawulayo unika ingxelo kuSihlalo weBhodi kwaye unonxibelelwano olusebenzayo noMphathiswa wezoKhenketho kunye noNobhala osisigxina kwi Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho.
Inkampani yenzelwe ukuxhasa urhulumente kunye neearhente zikarhulumente ekuphuhliseni ishishini lezokhenketho, ngakumbi ngokulungelelanisa kunye nokuququzelela inyathelo elikhawulezileyo phakathi komdla woluntu kunye necandelo labucala.
Amalungu eBhodi ye-TPDCo athathwe kumacandelo oluntu nakwabucala kwaye abandakanya abameli beJamaica Hotel & Umbutho wabakhenkethi (JHTA), Umbutho waseJamaica weVillas kunye neeNdawo (iJAVA) nakwindawo nganye yokutyelela. Usihlalo we-TPDCo wonyulwa nguRhulumente.
Ukuququzelela ukwahluka, uphuhliso kunye nokuphuculwa kwemveliso yezokhenketho kusetyenziswa abasebenzi abanamava nabaqeqeshiweyo ukomeleza amava abatyeleli ngokwakha imvumelwano kunye nemanyano yeqhinga kunye nabachaphazelekayo kushishino ukuze kukhuthazwe ukukhula kwezentlalo nezoqoqosho. Inkampani yoPhuhliso lweMveliso yezoKhenketho (TPDCo) liziko eliphambili eligunyaziswe nguRhulumente waseJamaica ukuququzelela ulondolozo, uphuhliso kunye nokomeleza imveliso yezokhenketho.
I-TPDCo, inkampani ekumgangatho ophezulu yemveliso yenkampani enegalelo kwimveliso eyahlukeneyo, eyandisiweyo yezokhenketho kunye namava otyeleli, ekhokelela kumgangatho wobomi ophuculweyo kubo bonke abantu baseJamaica.